TRF ao amin'ny gazety 2017 | Ny valisoa fanonerana | Gazety sy Internet
Home Momba anay TRF ao amin'ny Press 2017
Ny gazety dia nahita ny The Reward Foundation ary manaparitaka ny teny momba ny asantsika, anisan'izany ny kilasin'ny fanentanana amin'ny pôrnôgrafia; ny antso ho amin'ny fanabeazana mahomby, atidoha amin'ny ati-doha amin'ny sekoly rehetra; Mila fampiofanana ho an'ny mpitsabo NHS momba ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafika sy ny fandraisanay anjara fikarohana amin'ny fihenan'ny firaisana ara-nofo ateraky ny sary vetaveta. Ity pejy ity dia manasongadina ny sasany amin'ireo fahombiazantsika tamin'ny gazety sy tamin'ny Internet. Io no taonantsika tsara indrindra.
2 Desambra 2017 - Serivisy vaovao an-tserasera any Kroasia. Ny resadresaka feno miaraka amin'i Mary Sharpe dia misy Eto amin'ny teny kroaty. Ny Google Translate dia asa tsara manosika azy amin'ny teny anglisy. Ny andian-dahatsoratra iray lava kokoa tamin'ilay tafatafa dia niseho tao amin'ny gazety Glas Koncila isan-kerinandro tamin'ny 16 November 2017 ary azo jerena Eto.
16 Oktobra 2017 - fanarahana ny resadresaka tamin'ny Radio Sputnik
Ny lahatsoratra feno dia misy Eto -tserasera. Bilaogy TRF ao amin'ny tafatafa Eto ary mamela anao hihaino ny resadresaka mivantana.
10 Oktobra 2017 - TRF ao amin'ny PoliceProfessional.com, lahatsoratra avy amin'i Nick Hudson
9 Oktobra 2017 - TRF amin'ny gazety nasionaly
Ny lahatsoratra feno dia misy Eto.
Ny tantara feno dia misy Eto.
TRF amin'ny gazety raharaham-barotra
4 Oktobra 2017 - TRF dia manasongadina ny tantaran'ny pejy eo aloha
27 septambra 2017 - ny valisoa valisoa dia mpanohana ofisialy ny The Coolidge Effect any Edinburgh
23 septambra 2017 - ny valisoa valisoa dia mpanohana ofisialy ny The Coolidge Effect any Edinburgh
Ny lahatsoratra momba ny kristianina manontolo dia azo jerena ety anaty aterineto Eto. Ny dikan-teny dia niseho tao amin'ny tranonkala Soisa kristy jesus.ch as Pornographie motiviert Jugendliche zu sexuellen Straftaten amin'ny 13 September 2017.
Scottish Daily Mail, 4 Septambra 2017. Azo jerena amin'ny aterineto ihany koa ny tantara Eto.
Ny Herald, 4 Septambra 2017, Pejy 12. Misy ao anaty aterineto Eto. Nohavaozina tahaka ny Ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia nomena tsiny noho ny fiakaran'ny heloka momba ny firaisana ara-nofo eo ambanin'ny 18 on Aadhu.com tamin'io andro io ihany. Nisy kinova amin'ny fiteny alemana nipoitra tao amin'ny tranonkalan'ny aostraliana 'vaovao momba ny teknolojia ho avy' as Schottland dia manome Online-Pornos ho an'ny Sex-Verbrechen.
Alahady tolakandro, 3 Septambra 2017. Azo jerena amin'ny aterineto ihany koa ny tantara Eto. Navoaka tao amin'ny fanontana Dundee sy Newcastle ihany koa ny kinova.
Sunday Mail, 20 Aogositra 2017. Azo jerena amin'ny Internet ihany koa ity tantara ity Eto.
Ny Courier 3 Martsa 2017
Azo jerena ao amin'ny addictionhelper.com ny kinova fanovana amin'ity tantara Positively Scottish ity Eto.